Roof Top ဆက်သွယ်ရေးတာဝါ
XYTOWER | ဂေဟဗေဒကို ကာကွယ်ပါ။ မြက်ခင်းပြင်ပေါ်တွင် သံမဏိမျှော်စင်များ စိုက်ထူခြင်းဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လုပ်သားများသည် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ မည်ကဲ့သို့ တည်ဆောက်သည်ကို ကြည့်ပါ။
03-12-2021 တွင် admin မှ
အောက်တိုဘာ ၁၇ ရက် တွင် ဘုရင့်ဘူလက်မြို့ရှိ 110kV အပိုင်း I သွယ်တန်းသည့်နေရာ၌ အကြီးစား တူးဖော်ရေးယာဉ်ကြီးသည် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ထမ်းများ၏ ကွပ်ကဲမှုအောက်တွင် ရောင်ဘားရှင်းလင်းရေးဝင်လမ်းတစ်လျှောက် တာဝါ ၁၈၅ အုတ်မြစ်ချရာသို့ ဖြည်းညှင်းစွာ မောင်းနှင်လာခဲ့သည်။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း...
XYTOWER | တရုတ်နိုင်ငံ၏ သံမဏိမျှော်စင်များသည် အရေးကြီးသော တာဝန်နှင့် တာဝန်ကို ပခုံးဖက်ထားသည်။
26-11-2021 ရက်နေ့တွင် admin မှ
ပါတီတည်ထောင်ခြင်း နှစ် 100 ပြည့် နှစ်ပတ်လည်အတွက် ဝန်ဆောင်မှု အာမခံချက်တွင် ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ သံမျှော်စင်၏ နိုင်ငံရေး စရိုက်လက္ခဏာသာမက ၎င်း၏ တိုက်ခိုက်ရေး ထိရောက်မှု၏ အရေးကြီးသော စမ်းသပ်မှုလည်း ဖြစ်သည်။ ဆိုင်းဘုတ်လို့လည်း ခေါ်တဲ့ မျှော်စင်၊
XY မျှော်စင် | နီကာရာဂွာ ပရောဂျက်၏ 138kv ပါဝါလျှပ်စစ်မျှော်စင်ကို အောင်မြင်စွာ တည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့သည်။
15-11-2021 ရက်နေ့တွင် admin မှ
XYTower သည် အဓိကအားဖြင့် 10kv-500kv ဂီယာလိုင်းတာဝါ (ထောင့်သံမဏိမျှော်စင်၊ သံမဏိပိုက်မျှော်စင်၊ သံမဏိပိုက်တိုင်)၊ ဓာတ်အားခွဲရုံတည်ဆောက်ပုံနှင့် ပါဝါသံဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်ခြင်းတွင် အဓိကအားဖြင့် ပါဝင်နေပြီး လေအားလျှပ်စစ်၊ forei ...
XY မျှော်စင် | ဓာတ်အားလိုင်းတာဝါ၏ "အသွင်ပြောင်းခြင်း" ၏မှတ်တိုင်အသစ်
02-11-2021 တွင် admin မှ
Tongjiang သည် Sichuan နှင့် Shaanxi လမ်းဆုံရှိ Qinba တောင်တန်းဒေသ၏ကုန်းတွင်းပိုင်း၌တည်ရှိပြီးတစ်ချိန်ကတရုတ်နိုင်ငံ၏ဒုတိယအကြီးဆုံးဆိုဗီယက်နယ်မြေဖြစ်သော Sichuan Shaanxi တော်လှန်ရေးအခြေစိုက်စခန်း၏မြို့တော်ဖြစ်သည်။ ၁၉၃၂ ခုနှစ်တွင် တရုတ်အလုပ်သမားနှင့် လယ်သမားများ၏ စတုတ္ထတပ်ဦး...
XY မျှော်စင် | သံမဏိဈေးနှုန်း မြင့်တက်မှုကို လေ့လာခြင်း။
22-10-2021 ရက်နေ့တွင် admin မှ
နောက်ဆုံးရသတင်းများအရ ယခုနှစ်အတွင်း သံမဏိဈေးနှုန်းများ သိသိသာသာ မြင့်တက်လာရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းအရင်းမှာ ကုန်ကြမ်းဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်လာခြင်းနှင့် ပြည်တွင်းသံမဏိဈေးကွက်တွင် ဝယ်လိုအား အားကောင်းခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။ 1. စိုစ...
XY မျှော်စင် | 500KV Transmission Line Tower တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်း။
12-10-2021 ရက်နေ့တွင် admin မှ
2021 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့တွင်၊ xytowers မှတည်ဆောက်ထားသော 500 kV high voltage transmission line တာဝါတိုင်များ၏အပြန်အလှန်တပ်ဆင်စမ်းသပ်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကောင်းကင်ကြီးက ကြည်လင်ပြီး ကြည်လင်နေတယ်။ အမြင့် 30 ထက်မကျော်သော တာဝါတိုင်သည် ရှည်လျားသော အလုံးအရင်းဖြင့် ထုလုပ်ထားပြီး တိကျစွာ ပြုတ်ကျရန် ...
XY မျှော်စင် | ပြည်တွင်းသံမဏိဈေးကွက်
10-09-2021 တွင် admin မှ
ယခုတစ်ပတ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံရှိ မြို့ကြီးများတွင် သံမဏိဈေးကွက် စျေးနှုန်းသည် ယွမ် 10-170/ton တိုးလာသဖြင့် ပြင်းထန်စွာ အတက်အကျရှိသည်။ အဓိက ကုန်ကြမ်း အများစု တက်လာတယ်။ ယင်းတို့အနက် တင်သွင်းသည့် သတ္တုရိုင်းများ ဈေးနှုန်းအတက်အကျနှင့် ပေါင်းစည်းကာ သတ္တုရိုင်းများ စျေးနှုန်း သိသိသာသာ မြင့်တက်လာကာ ပြည်တွင်း...
XY မျှော်စင် | မြန်မာနိုင်ငံဝယ်သူများအတွက် Power Tower တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် စမ်းသပ်ခြင်း။
01-09-2021 တွင် admin မှ
Q235 နှင့် Q345 hot-rolled angle steel သည် တရုတ်နိုင်ငံရှိ ဂီယာလိုင်းတာဝါတိုင်များအတွက် အဓိကပစ္စည်းများဖြစ်သည် ။ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီနိုင်ငံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက တရုတ်နိုင်ငံရှိ ဂီယာတာဝါတိုင်များတွင် အသုံးပြုသည့် သံမဏိများသည် ပစ္စည်းတစ်ခုတည်း၊ ခိုင်ခံ့မှုတန်ဖိုးနည်းပါးပြီး သေးငယ်သည်...
XY မျှော်စင် | တစ်နှစ်ခွဲလုပ်ငန်းအကျဉ်းချုပ်နှင့် အလားအလာ
20-07-2021 တွင် admin မှ
ကုမ္ပဏီ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် ကုမ္ပဏီသည် တစ်နှစ်ခွဲလုပ်ငန်းအကျဉ်းချုပ် အစည်းအဝေးကို ကျင်းပခဲ့သည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ကုမ္ပဏီသည် "ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၊ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှု...
XY မျှော်စင် | ပါတီတည်ထောင်ခြင်း နှစ် 100 ပြည့် ဂုဏ်ပြုရန် COFCO နှင့် ချစ်ကြည်ရေး ဘတ်စကက်ဘောပြိုင်ပွဲ
02-07-2021 တွင် admin မှ
တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ တည်ထောင်ခြင်း နှစ် ၁၀၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် Sichuan Xiangyue Power Component Co., Ltd. နှင့် COFCO Packaging Co., Ltd. တို့ ချစ်ကြည်ရေး ဘတ်စကက်ဘောပြိုင်ပွဲကို ဇွန်လ ၂၈ ရက်နေ့ ညနေ ၄ နာရီမှ ညနေ ၆ နာရီအထိ ကျင်းပခဲ့သည်။ နှစ်ဖက်ကစားသမားတွေက တက်ကြွတဲ့ တိုက်စစ်ဆင်မှုကို ပြသခဲ့ပါတယ်..။
XY မျှော်စင် | တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ နှစ် ၁၀၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ်
22-06-2021 တွင် admin မှ
အချိန်တွေက ငါတို့မျက်စိရှေ့မှာ မြန်မြန်ကုန်သွားတယ်။ အတိတ်ကိုပြန်အမှတ်ရရင်း ကျွန်တော်တို့ပါတီဟာ နှစ် ၁၀၀ တိုင်တိုင် ကြိုးကြိုးစားစား ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့လမ်းပါ။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးက ပါတီအတွက် ဂုဏ်ယူကျေနပ်ကြပါတယ်။ နှစ် 100 သည် မျက်စိတစ်မှိတ်နှင့်တူသည်။ ပြီးသွားပါပြီ! ဒါပေမယ့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုက ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့...
XY မျှော်စင် | တောင်အာဖရိကမှ ဖောက်သည် ကိုယ်စားလှယ်များသည် VV မျှော်စင်များကို သွားရောက်ခဲ့သည်။
27-04-2021 တွင် admin မှ
2021 ခုနှစ် ဧပြီလ 26 ရက်နေ့ တွင် တောင်အာဖရိက ဖောက်သည် ကိုယ်စားလှယ်များ သည် ကွမ်တုံမှ ဝေးကွာသော ခရီးကို ထွက်ခွာလာခဲ့ပြီး Xiang Yue Power Line components Co Ltd. တွင် ကပ်ရောဂါကြောင့် တောင်အာဖရိက ဖောက်သည်များသည် XT Towers ကို လူကိုယ်တိုင် လာရောက် စစ်ဆေးခြင်း မပြုနိုင်သဖြင့် ၎င်းတို့၏ စီစဉ်ပေး...
XY မျှော်စင် | နှစ်ပတ်လည် အလုပ်အကျဉ်းချုပ် အစည်းအဝေး၊ နောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်၊ ရှေ့ကိုမျှော်
25-01-2021 ရက်နေ့တွင် admin မှ
(၁၇) ကြိမ်မြောက် CPC အမျိုးသားကွန်ဂရက်၏ စိတ်ဓာတ်ကို အလေးအနက်ထား၍ ပါတီ၏ စိတ်ဓာတ်ကို စိတ်အားထက်သန်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ရန်၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ် သိပ္ပံနည်းကျ အမြင်ဖြင့် အလုံးစုံ အခြေအနေကို ဦးဆောင်ရန်၊ ဥပဒေနှင့်အညီ အုပ်ချုပ်မှုအား လိုက်နာရန်၊ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အသွင်အပြင်ကို အားကောင်းစေရန်၊
စက်ရုံခေါင်း:မဟုတ်ဘူး 528၊ အနောက်အပိုင်း၊ Liutai Avenue၊ Chengdu၊ တရုတ်နိုင်ငံ HDG စက်ရုံ-အမှတ် ၃၆၆၊ Tongxin Avenue၊ Chengdu၊ China